2021 Statistika momba ny trosa ara-pahasalamana - SingleCare - Orinasa | Desambra 2021
Lalao Vaovao, Wellness Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fiaraha-Monina Ny Fizahana Orinasa, Vaovao Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fialam-Boly Fanatanjahan-Tena Mavesatra Orinasa, The Checkout News Fahasalamana
Tena >> Orinasa >> 2021 antontan'isa momba ny trosa ara-pitsaboana
2021 antontan'isa momba ny trosa ara-pitsaboana
Ny trosa ara-pahasalamana dia olana mitombo any Etazonia, miaraka amina Amerikanina maro miaina tsy filaminana ara-bola ary koa fatiantoka. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2016 Kaiser Family Foundation sy New York Times, Amerikanina mihoatra ny 1 amin'ny 4 no manana olana amin'ny fandoavana volavolan-dalàna momba ny fitsaboana tato ho ato. Ary rehefa miavosa ny trosa ara-pitsaboana, izany dia mety hiteraka fanapahan-kevitra sarotra ara-bola, toy ny tsy tokony hampihenan-kanina, na fitafiana, na kojakoja ilaina amin'ny ankohonana hafa.
Na dia tranga tsy ampoizina toy ny fijanonan'ny hopitaly aza dia mpandray anjara lehibe (The American Journal of Medicine dia mitatitra izany efa ho ny antsasaky ny olona tratry ny fatiantoka ara-pahasalamana no nanondro ny faktioran'ny hopitaly ho fandaniana lehibe indrindra) , fa ny vola lafo amin'ny fitsaboana dia azo antoka fa tsy manampy. Mandray ohatra iray fotsiny , ny salanisan'ny fijanonan'ny hopitaly any Etazonia dia mitentina 5,220 $ isan'andro - raha oharina amin'ny $ 765 fotsiny any Aostralia. Amin'ny ankapobeny, ny Etazonia dia mandany $ 3,5 trillion amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana isan-taona .
Ireto statistika manaraka ireto dia manampy amin'ny fanazavana ny haben'ny olana momba ny trosa ara-pitsaboana any Etazonia.
Ny zava-misy amin'ny trosa ara-pitsaboana
Ny olan'ny trosa ara-pitsaboana dia mety hamely olona: ny olana dia mihena amin'ny sokajin-taona sy ny haavon'ny fanabeazana. Na ny olona heverina ho tompon'andraikitra ara-bola aza dia mety tratran'ny trosa ara-pitsaboana. Maherin'ny antsasaky ny Amerikanina manana trosa ara-pahasalamana no tsy manana trosa hafa voatanisa ao amin'ny tatitra momba ny trosany. Ny trosa ara-pahasalamana irery dia mety hanasarotra ny fividianan'olon-tokana trano na hahazoana taha ambony amin'ny carte de crédit.
Ny salan'isan'ny olona mandalo fatiantoka ara-pahasalamana dia 44,9 taona. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Amin'ireo olona miaina fatiantoka ara-pahasalamana dia 46.3% no manambady. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Amin'ireo olona tratry ny fatiantoka ara-pahasalamana dia 60,3% no nanatrika ny oniversite. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Ny salanisan'ny fidiram-bola isam-bolana isam-bolana amin'ny mpikirakira fatiantoka ara-pahasalamana dia $ 2,586 / volana. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Amin'ireo fianakaviana tratry ny fatiantoka ara-pahasalamana, 20,1% dia fianakaviana miaramila. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Ny trosa antonony ho an'ny tokantrano tratry ny fatiantoka ara-pahasalamana dia $ 44,622. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Manodidina ny 19,5% amin'ny tatitra momba ny trosan'ny mpanjifa no misy fanangonana iray na maromaro. (Birao fiarovana ny mpanjifa ara-bola, 2014)
Ny trosa ara-pahasalamana tsy voaloa dia voarakitra amin'ny tatitra momba ny trosa dia 579 $. (Birao fiarovana ny mpanjifa ara-bola, 2014)
22% amin'ireo mpanjifa manana trosa manangona no tsy manana afa-tsy trosa ara-pitsaboana. (Birao fiarovana ny mpanjifa ara-bola, 2014)
Ny 54% amin'ireo mpanjifa manana trosa ara-pahasalamana dia tsy manana trosa hafa voatanisa ao amin'ny tatitra momba ny trosany. (Birao fiarovana ny mpanjifa ara-bola, 2014)
Ny vidin'ny trosan'ny mpitsabo amin'ny olombelona
Ny trosa ara-pitsaboana sy ny tahotra trosa ara-pitsaboana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny Amerikanina. Iray amin'ireo olana lehibe indrindra ny hoe ny trosa dia mety hahatonga ny olona hanao tsirambina ny olan'ny fitsaboana. Amerikanina efa ho iray amin'ny telo no nilaza fa nanemotra ny fikarakarana izy ireo satria niahiahy momba ny vidiny .
Amin'ny sehatra hafa, rehefa manahy ny olona fa handoa be loatra amin'ny serivisy dia afaka miantsena izy ireo. Fa ny Amerikanina nanandrana an'io tamin'ny serivisy fitsaboana dia tsy dia manana vintana be loatra. Amin'ireo olon-dehibe izay nilaza fa nanandrana niantsena manodidina azy dia 69% no nilaza fa somary sarotra na tena sarotra ilay traikefa .
21% ny olon-dehibe 18-64 taona dia tsy mbola nanao fitsapana ara-pitsaboana na fitsaboana natolotry ny dokotera noho ny vidiny. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
32% ny olon-dehibe 18-64 taona dia nahemotra ny fikarakarana fitsaboana ilain'izy ireo noho ny vidiny. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Ny 40% -n'ny olon-dehibe 18-64 taona dia niankina tamin'ny fanafody an-trano na fanafody lafo vidy fa tsy nankany amin'ny dokotera, noho ny vidiny. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
34% ny olon-dehibe 18-64 taona milaza fa tsy manazava ny vidin'ny fomba fanao amin'izy ireo mihitsy ny dokoterany. (Kaiser Family Foundation / New York Times, 2016)
Eo amin'ireo olon-dehibe izay nilaza fa nanandrana niantsena tany amin'ny mpamatsy isan-karazany izy ireo mba hahitana ny vidiny tsara indrindra amin'ny serivisy, 69% no nilaza fa somary sarotra na sarotra be ilay traikefa. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Anisan'ireo manana olana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana, 44% no milaza fa nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fianakaviany ireo olana ireo. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Anisan'ireo manana olana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana, 29% no milaza fa ny olana amin'ny trosa ara-pitsaboana dia nanomboka niteraka olana tamin'ny fandoavana faktiora hafa, fa tsy fitsaboana. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
62% amin'ireo manana olana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana no milaza fa manana fiantohana ara-pahasalamana izy ireo rehefa nanomboka ny fitsaboana. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Anisan'ireo manana olana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana izay nanana fiantohana, 26% no milaza fa ny antony tsy ahitan'izy ireo ny fandoavana ny fandavana azy ireo dia nolavina. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Amin'ny farany, ny faktiora ara-pitsaboana dia mety hamela olona sasany hanana safidy voafetra hisorohana ny fatiantoka. Anisan'ireo Amerikanina manana olana ara-pitsaboana:
53% no nilaza fa niara-niasa tamina drafitra fandoavambola niaraka tamin'ny mpamatsy azy ireo izy ireo.
37% no milaza fa mindrana vola amin'ny namana na fianakaviana izy ireo.
34% no nilaza fa nampitombo ny trosan'ny carte de crédit-ny.
70% no milaza fa mampihena ny fandaniany amin'ny sakafo, akanjo, na kojakoja ilaina amin'ny ankohonana hafa.
41% no nilaza fa naka asa fanampiny na niasa ora maro kokoa.
59% no nilaza fa lany ny ankamaroany na ny tahiriny rehetra.
35% no nilaza fa tsy afaka nandoa ny vidin'ny kojakoja ilaina amin'ny sakafo, ny hafanana, na ny trano izy ireo.
Loharano: Kaiser Family Foundation / New York Times, 2016
Fanombohana indostrialy fahasalamana marobe, toa ny SingleCare, no miasa mitady vahaolana vaovao hampihenana ny vidin'ny fitsaboana. Ireo amerikana manararaotra ireo safidy vaovao ireo dia mety afaka mitazona ny trosan'ny dokotera tsy ho voafehy.
Ny trosa ara-pahasalamana dia mety hiteraka olana ara-bola mitohy ihany koa. Anisan'ireo Amerikanina manana faktiora ara-pitsaboana voangona:
15% no milaza fa 10 000 dolara na mihoatra no ananany.
33% no milaza fa manana indram-pianaran'ny mpianatra koa izy ireo.
17% no milaza fa manana vola amin'ny mpampindram-bola koa izy ireo.
58% no milaza fa nifandray tamin'izy ireo ny maso ivoho mpanangona.
Inona no mahatonga ny trosa ara-pitsaboana?
Tsy ny vola lany amin'ny fitsaboana rehetra no lasa trosa. Ary ny faktiora manokana dia tsy foana ny olana. Ny olona marary na tsy maintsy mikarakara olon-tiana marary dia mety hahita ny fidinan'ny karamany noho ny fotoana tsy fiasana. Raha ny tena izy, mihoatra ny iray amin'ny fatiantoka ara-pahasalamana fito dia vokatry ny aretin'ny zaza iray .
Tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana dia hitan'ny mpikaroka ny olona miatrika trosa ara-pitsaboana. Ireo valintenin'ireo Amerikanina ireo dia manambara ny toe-javatra ara-bola sy ara-pahasalamana izay azo inoana fa mitarika fihenjanana ara-bola mafy.
62,1% amin'ireo nanao ny fatiantoka dia nanondro volavolan-pitsaboana na fahaverezan'ny fidiram-bola noho ny aretina na ny fikolokoloana antony nahatonga azy ireo bankiropitra. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
14,6% ny fatiantoka ara-pahasalamana dia vokatry ny aretin-jaza iray. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Anisan'ireo manana olana amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana, 10% no milaza fa manana $ 500 na latsaky ny volany. (Kaiser Family Foundation / New York Times , 2016)
Ny fanadihadiana iray natao vao haingana dia nahafantatra ireo serivisy fitsaboana manokana nanjary trosa ara-pitsaboana. Anisan'ireo serivisy notaterina izay niteraka olana tamin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana ny:
Fitsidihan'ny dokotera: 65%
Fitsapana diagnostika: 65%
Fitsidihana efitrano fitsaboana maika: 61%
Serivisy fitsaboana any ivelany: 49%
Vidin'ny fanafody fanafody: 52%
Fikarakodia mpitsabo mpanampy na fikarakarana maharitra: 4%
Fikarakarana nify: 41%
Fikarakarana ara-pitsaboana ankizy: 25%
Fijanonan'ny hopitaly tsy miankina amin'ny fotoana fohy: 66%
Fanadihadiana iray hafa no nametraka fanontaniana mitovy amin'izany momba ny antony mahatonga ny trosa ara-pitsaboana.
48% amin'ireo olona nisedra bankiropitra ara-pahasalamana no nilaza fa ny faktiora amin'ny hopitaly no fandaniany vola lehibe indrindra. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
18,6% amin'ireo olona niaina tamin'ny fatiantoka ara-pahasalamana no nilaza ho zava-mahadomelina lehibe indrindra. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
15.1% ny olona niaina bankiropitra ara-pahasalamana no nanondro ny faktioran'ny dokotera ho fandaniana lehibe indrindra. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
4.1% ny olona niaina bankiropitra ara-pahasalamana no nantsoina hoe premium ho fandoavany vola lehibe indrindra. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Ny saram-pitsaboana ivelan'ny paosy dia mitentina 17 943 $ ho an'ny fianakaviana bankiropitra ara-pahasalamana. ( Gazety amerikana momba ny fitsaboana , 2009)
Antontan'isa momba ny vidin'ny fitsaboana
Ny olan'ny trosa ara-pitsaboana dia mifamatotra akaiky amin'ny vidin'ny fitsaboana. Nandany vola bebe kokoa noho ny firenena mitovy amin'izany i Etazonia amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ary ny vesatry ny fihenan'ny vidim-piainana manerana ny toekarena amerikana, mitaky fandoavana be avy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, sehatra tsy miankina ary olon-tsotra.
Ny fitondrana izany vidiny izany dia midika fa kely ny vola lanin'ny governemanta amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fotodrafitrasa. Midika izany fa kely ny vola lanin'ny orinasa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana. Midika izany fa ny ankohonana amerikana dia tsy manana vola firy amin'ny fitafiana sy sakafo.
Ary mitombo ny enta-mavesatra. ny Etazonia izao dia mandany $ 10,000 isan-olona amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana isan-taona , avy amin'ny latsaky ny $ 5,000 isan'olona isan-taona amin'ny 2009 .
Nandany $ 3,5 trillion tamin'ny fitsaboana ara-pahasalamana isan-taona i Etazonia. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Nandany 10 739 dolara isan-taona ny amerikana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny fandaniana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia mitentina 17,9% amin'ny vokatra amerikanina an-trano (PIB). (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny amerikana dia mandany $ 1,18 trillion isan-taona amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Mandany 365,5 miliara dolara isan-taona ny Amerikanina amin'ny fandaniana ara-bola any ivelany. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny amerikana dia mandany $ 1,14 trillion isan-taona amin'ny fandaniana amin'ny hopitaly. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny fandaniana amin'ny fiantohana ara-pahasalamana manokana dia mitentina 34% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana amerikana. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola any ivelan'ny paosy dia mitentina 10% amin'ny fandaniana amin'ny fitsaboana amerikana manontolo. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Mandany 694,3 miliara dolara isan-taona ny Amerikanina amin'ny dokotera sy ny serivisy klinika. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Mandany 333,4 miliara dolara isan-taona ny Amerikanina amin'ny fanafody fanafody. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny isan-tokantrano dia mitentina 28% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana tanteraka. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Ny orinasa tsy miankina dia mitentina 19,9% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2017)
Amin'ny salan'isa, ny fandaniana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny Amerikanina 65 taona no ho miakatra dia $ 19988 isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2014)
Amin'ny salanisa, ny fandaniana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny Amerikanina miasa taona (18-64) dia $ 7.153 isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2014)
Amin'ny salan'isa, ny fandaniana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny zaza amerikana (0-18) dia $ 3,749 isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2014)
Eo ho eo, ny fandaniana amerikana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy dia $ 8,811 isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2014)
Eo ho eo, ny fandaniana amerikana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny lehilahy dia $ 7.272 isan-taona. (Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly, 2014)
Ny fandaniana Medicare dia mitentina 17,1% amin'ny tetibola federaly amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana medicaid dia mitentina 9,5% amin'ny tetibola federaly amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny vidin'ny fiantohana ara-pahasalamana
Ny ankamaroan'ny olona dia miantehitra amin'ny fiantohana ara-pahasalamana hanampiana ny saram-pahasalamany, saingy miakatra hatrany ny vidin'ny fandrakofana.
Ny salanisa azo esorina dia 4,544 $. Midika izany fa ny marary voaantoka dia antenaina handoa $ 5,000 eo am-paosy alohan'ny handoavan'ny fiantohana ny sarany ara-pitsaboana na fanafody. (Kaiser Family Foundation, 2019)
Ny salan'isa antonony dia nitombo 4% ho an'ny olona ary 5% ho an'ny fianakaviana tamin'ny taona 2019. Ho an'ny toe-javatra dia nitombo 3,4% ny karaman'ny mpiasa ary nitombo 2% ny fiakaran'ny vidim-piainana. (Kaiser Family Foundation, 2019)
Ahoana ny fandaniana ny vidin'ny fitsaboana?
Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nanondro izay tolotra ara-pitsaboana indrindra amin'ny fandaniana ara-pitsaboana any Etazonia. Any Etazonia, ity ny fandaniana isan-taona amin'ny fitsaboana ireto fepetra manaraka ireto:
Fikarakarana mahazatra, famantarana ary soritr'aretina: $ 289,9 miliara
Aretina amin'ny rafi-pandaminana: $ 259,2 miliara
Aretina musculoskeletal system: 219,8 miliara dolara
Aretina amin'ny taovam-pisefoana: 176,5 miliara dolara
Aretin'ny rafitra endocrine: 168,7 miliara dolara
Aretina amin'ny rafitra mampatahotra: $ 159,5 miliara
Aretin-tsaina: $ 109,6 miliara
Fitsaboana mifandraika amin'ny fitondrana vohoka: 50,5 miliara dolara
Loharano: California Health Care Foundation, 2019
33% amin'ny fandaniana ara-pahasalamana any Etazonia dia mankany amin'ny fikarakarana hopitaly. (California Health Care Foundation, 2019)
20% amin'ny fandaniana ara-pahasalamana any Etazonia dia mankany amin'ny serivisy mpitsabo sy klinika. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny 10% amin'ny fandaniana ara-pahasalamana any Etazonia dia mankany amin'ny fanafody fanafody. (California Health Care Foundation, 2019)
Iza no mandoa ny saram-pitsaboana any Etazonia?
Ny enta-mavesatry ny vidin'ny fanafody amerikana dia saika nitondran'ny governemanta, ny olona tsirairay ary ny orinasa. Araka ny California Health Care Foundation (2019):
Ny governemanta federaly dia mandoa 28% amin'ny vola lany amin'ny fahasalamana amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny olona sy ny tokantrano dia mandoa 28% amin'ny vola lany amin'ny fahasalamana amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny orinasa tsy miankina dia mandoa 20% amin'ny fandaniana ara-pahasalamana any Etazonia. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fanjakana sy ny fanjakana eo an-toerana dia mandoa 17% amin'ny vola lany amin'ny fahasalamana amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Fikambanana tsy miankina hafa, toy ny tsy mitady tombombarotra, dia mandoa 7% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana amerikana. (California Health Care Foundation, 2019)
Amin'ny salan'isa, 37% amin'ny fandaniam-pahasalaman'ny ankohonana iray dia mandeha amin'ny fandaniana ivelan'ny-paosy. (California Health Care Foundation, 2019)
Amin'ny salan'isa, 28% amin'ny fandaniam-pahasalaman'ny ankohonana iray dia mankany amin'ny anjarany fiantohana ara-pahasalamana tohanan'ny mpampiasa. (California Health Care Foundation, 2019)
Amin'ny salan'isa, 17% amin'ny fandaniam-pahasalaman'ny ankohonana iray dia mankany amin'ny fanohanana Medicare amin'ny alàlan'ny hetra karama. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny vola lany amin'ny fiantohana ara-pahasalamana manokana any Etazonia dia $ 1,2 trillion. (California Health Care Foundation, 2019)
45% amin'ny totalin'ny vola lany amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina no saron'ny orinasa tsy miankina. (California Health Care Foundation, 2019)
23% amin'ny totalin'ny vola lany amin'ny fiantohana ara-pahasalamana tsy miankina no saron'ny governemanta (matetika, toy ny fandraisana anjara amin'ny drafi-pahasalamana tohanan'ny mpampiasa). (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ambiny avy any am-paosin'i Etazonia isaky ny Capita dia nisondrotra tamin'ny $ 91 tamin'ny 1967 ka hatramin'ny $ 1,124 tamin'ny taona 2017. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandinihana farany dia naneho ny fomba fanaparitahana ny fandaniana amin'ireo Amerikana amin'ny sokajin-taona samy hafa:
Amerikana 85 taona no ho miakatra: Kaonty ho an'ny 2% amin'ny mponina, ary 8% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. Ny salan'isan'ny fandaniana isan-taona ho an'ny olona amin'ity sokajin-taona ity dia $ 32.411.
Amerikanina 65-84 taona: Kaonty 12% amin'ny mponina, ary 26% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. Ny salan'isan'ny fandaniana isan-taona ho an'ny olona amin'ity sokajin-taona ity dia 16872 $.
Amerikanina taona 45-64: Kaonty ho an'ny 26% amin'ny mponina, ary 33% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. Ny salan'isan'ny fandaniana isan-taona ho an'ny olona amin'ity sokajin-taona ity dia $ 9,513.
Amerikanina taona 19-44: Kaonty 35% amin'ny mponina ary 21% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. Ny salan'isan'ny fandaniana isan-taona ho an'ny olona amin'ity sokajin-taona ity dia 4 458 $.
Amerikanina 18 taona no ho miakatra: Kaonty ho an'ny 25% amin'ny mponina, ary 12% amin'ny fandaniana amin'ny fahasalamana. Ny salan'isan'ny fandaniana isan-taona ho an'ny olona amin'ity sokajin-taona ity dia $ 3,352.
Mampitaha ny vidin'ny fitsaboana amerikana amin'ny firenena hafa
Ny amerikana dia mety mijaly noho ny trosa avo indrindra amin'ny trosa ara-pitsaboana satria, amin'ny ampahany, ny halafon'ny fikarakarana any Etazonia .. Ny olona any amin'ny firenena manana sarany ambany amin'ny fitsaboana dia tsy mora tratran'ny trosa ara-pitsaboana sy fatiantoka.
Saingy tsy izany no izy ny zava-drehetra dia tsy dia lafo loatra any amin'ireo firenena manana vidin'ny fitsaboana ambany. Ny mpikaroka dia nanondro ireo firenena manana fari-piainana mitovy amin'izany any Etazonia ary nahita fa ny vidin'ny fitsaboana any Etazonia dia ambony lavitra noho ny tsy fitovian'ny harena.
Ohatra, ny fandaniana ara-pahasalamana isaky ny kapita dia 84.8% avo kokoa any Etazonia noho ny any Canada . Ireto antontan'isa manaraka ireto dia mampiseho fa ohatrinona ny amerikana mandoa vola amin'ny fomba fitsaboana mahazatra noho ny olona any amin'ny firenena hafa.
Ny salanisan'ny fijanonan'ny hopitaly isan'andro dia any Etazonia dia $ 5,220. Ny salanisan'ny vidin'ny hopitaly isan'andro any Australia dia $ 765. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salan'isa antonony amin'ny fandidiana fandidiana fo any Etazonia dia $ 37318. Ny salan'isa antonony amin'ny fandidiana fandidiana fo any Etazonia dia $ 24059. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny dokotera amerikana dia manao fizarana cesarean 322 isaky ny teraka 1.000. Ny salanisa amin'ireo firenena manankarena toy izany dia 264 C-section isaky ny teraka 1.000. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salan'isa vidin'ny fiterahana ara-dalàna any Etazonia dia $ 10808. Ny salan'isa vidin'ny fiterahana ara-dalàna any Aostralia dia $ 5,312. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salan'isa salan'ny fizarana cesarean any Etazonia dia 16106 $. Ny salanisa salan'ny C-section any Aostralia dia $ 7.901. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salanisa vidin'ny MRI any Etazonia dia $ 1111. Ny salanisan'ny vidin'ny MRI any Aostralia dia $ 215. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salan'isan'ny appendectomy any Etazonia dia $ 9 930. Ny salanisan'ny vidin'ny appendectomy any Etazonia dia $ 8 009. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salanisan'ny vidin'ny fanoloana hip ao Etazonia dia $ 29067. Ny salanisan'ny vidin'ny fanoloana hip amin'ny Fanjakana Mitambatra dia 16335 $. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salanisan'ny vidin'ny Humira, fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-tratra, dia 96% eo ho eo no ambony kokoa any Etazonia raha oharina amin'ny Fanjakana Mitambatra. (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny salan'isa salanisan'ny scan CT any Etazonia (896 $) dia avo valo heny noho ny any Canada ($ 97). (Kaiser Family Foundation, 2018)
Ny fanadihadiana momba ny raharaha ara-pahasalamana tamin'ny taona 2011 dia nampitaha ny fandaniam-pahasalamana tany amin'ny firenena, ary nahita fa ny fandaniana ara-pahasalamana amerikana isan-kapita dia avo lavitra noho ny an'ny firenena mitovy aminy.
Ny fandaniana ara-pahasalamana amerikana isaky ny kapita dia:
141% avo kokoa noho ny any Angletera.
125% ambony noho ny any Aostralia.
104% noho ny any Frantsa.
102% ambony noho ny any Alemana.
Loharano: Raharaha ara-pahasalamana, 2011
Ny valim-pikarohana hafa avy amin'ny fanadihadiana dia misy:
30,8% amin'ny fandaniana ara-pahasalamana amerikana isaky ny kapita dia amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana. Ny salanisan'ny vola miditra isan-taona ho an'ny mpitsabo voalohany any Etazonia dia $ 186,582. (Raharaha ara-pahasalamana, 2011)
Amin'ny salan'isa, dokotera amerikana mpitsabo voalohany dia mahazo $ 61 478 bebe kokoa isan-taona noho ny mpitsabo voalohany any Canada. (Raharaha ara-pahasalamana, 2011)
Ny salanisan'ny vola miditra isan-taona ho an'ny mpandidy orthopedika amerikana dia $ 442.450. (Raharaha ara-pahasalamana, 2011)
Amin'ny ankapobeny, ny mpandidy orthopedika amerikana dia mahazo $ 233.816 isan-taona mihoatra ny mpandidy orthopedic any Canada. (Raharaha ara-pahasalamana, 2011)
Hitombo hatrany ny vidim-panafody
Ny vidim-pitsaboana avo lenta dia ateraky ny olan'ny rafitra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Mandra-pahatongan'ireo olana ireo dia hitombo hatrany ny vidin'ny fitsaboana.
Ny fandaniana ara-pahasalamana dia vinavinaina hahatratra $ 6 trillion hatramin'ny 2027. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana dia antenaina hitombo amin'ny taha 5,5% isan-taona. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana dia vinavinaina hahatratra 19,4% amin'ny harin-karena faobe amin'ny 2027. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana ho an'ny olona ao amin'ny Medicare dia $ 12,347 tamin'ny taona 2017 ary antenaina hahatratra $ 19,546 amin'ny 2027. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana ho an'ny olona ao amin'ny Medicaid dia $ 08.013 tamin'ny 2017 ary antenaina hahatratra $ 12.029 amin'ny 2027. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana ho an'ny olona amin'ny drafitra fikarakarana ara-pahasalamana tohanan'ny mpiasa dia $ 5,942 tamin'ny 2017, ary antenaina hahatratra $ 9137 amin'ny 2027. (California Health Care Foundation, 2019)
Ny fandaniana ara-pahasalamana ho an'ny olona amin'ny drafitra fitsaboana dia antenaina hitombo 50% ao anatin'ny 10 taona ho avy. (California Health Care Foundation, 2019)
Mamporisika ny mpanao gazety, ny mpikaroka, ny mpianatra ary ny hafa izahay hizara ireo antontan'isa ireo. Ny trosa ara-pitsaboana sy ny vidiny lafo miteraka izany dia manimba ny vola. Raha ny fanazavan'ireo manampahaizana dia hitohy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ka hampiharihary fa mihamaro hatrany ny Amerikanina manambana trosa. Isika rehetra dia samy manana ny anjara birikiny amin'ny fampisehoana ny maha-matotra an'ity olana ity.
Ny fatiantoka ara-pahasalamana any Etazonia, 2007: Vokatry ny fanadihadiana nasionaly , Gazety Amerikanina momba ny fitsaboana.
Kaiser Family Foundation / Fanadihadiana momba ny volavolan-dalàna momba ny fitsaboana any New York Times , Kaiser Family Foundation
Fizarana vola ho an'ny drafitra atolotra eo amin'ny tsenan'ny federaly, 2014-2020 , Kaiser Family Foundation
Fanadihadiana tombontsoa ho an'ny fahasalamana ho an'ny mpampiasa 2019 , Kaiser Family Foundation
Ny fandoavam-bola avo kokoa aloa dia omen'ny mpitsabo amerikana fandaniana avo kokoa ho an'ny serivisy mpitsabo raha oharina amin'ny firenena hafa , Raharaha ara-pahasalamana
Ahoana ny fampitahana ny vidin'ny fahasalamana sy ny fampiasana any Etazonia amin'ny firenena hafa? , Tracker an'ny rafitra momba ny fahasalamana Peterson-Kaiser
Inona no fiantraikan'ny vidiny amin'ny fidirana amin'ny fikarakarana? , Tracker an'ny rafitra momba ny fahasalamana Peterson-Kaiser
California Almanoc fitsaboana ara-pahasalamana , California Health Care Foundation
Takelaka momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly , Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly
Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly , Data momba ny fandaniana ara-pahasalamana nasionaly
Tatitra momba ny trosan'ny mpanjifa: Fianarana momba ny fanangonana fitsaboana sy fitsaboana tsy fitsaboana , Birao fiarovana ny mpanjifa
Ny voka-dratsy mety hitranga 4 an'ny statins (sy ny fomba hiadiana amin'izany)
Mahatonga anao hitombo lanja ve ny fitsaboana ny allergy?
afaka misotro toaka ve aho rehefa misotro sudafed
hafiriana aorian'ny fihinanana antibiotika no azoko ampiasaina
pilina fanabeazana aizana tsara indrindra ho an'ny fampitomboana lanja
inona no fanafody mety hiteraka fiheverana diso diso amin'ny methamphetamines
inona ny haavon'ny siramamy mahazatra ho an'ireo diabeta
inona no mety hiteraka fitiliana diso amin'ny fisintahana fisotrony?